Fitbit Versa Lite dia fanombohana vaovao an'ny Fitbit ho an'ny smartwatches | Androidsis
Smartwatches dia nanjary fitaovana iray ampiasain'ny mpampiasa maro, mpampiasa efa nahita ny fatran'ny fantsom-tànana fatratra tamin'ny fiovana voalohany, hatramin'ny tsy avelan'izy ireo hahafantatra ny fampandrenesana izay raisin'ny finday avo lenta isan'andro.
Tena ilaina io asa io raha vao zatra izany ary sarotra be ny manandrana manao azy raha tsy misy azy. Raha mitady smartwatch misy kalitao amin'ny vidiny mihoatra ny mahaliana ianao, dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Fitbit Versa Lite i Fitbit. kinova tsy lafo amin'ny Versa veteran, miaraka amin'ireo endri-javatra vitsy kely kokoa.
1 Endri-javatra lehibe an'ny Fitbit Versa Lite
2 Miasa ho antsika ao amin'ny Fitbit Versa Lite
Endri-javatra lehibe an'ny Fitbit Versa Lite
Quantification ny dingana sy ny kaloria.
Fanaraha-maso ny tahan'ny fo mandritra ny 24 ora isan'andro.
Fiainana bateria hatramin'ny 4 andro.
Lentika anaty rano hatramin'ny 50 metatra.
Maody fanaovana fanatanjahan-tena mihoatra ny 15.
Ny fifehezana ny halavirana mandeha sy ny tahan'ny fo mandritra ny fotoana.
Fampiharana sy toeram-piambenana marobe.
Fanaraha-maso ny fahasalaman'ny vehivavy sy ny fahavokarana.
Miasa ho antsika ao amin'ny Fitbit Versa Lite
Altimeter, noho izany tsy haintsika amin'ny fotoana rehetra ny haavon'ny toerana misy antsika raha te hiakatra na hahafantatra ireo tohatra nianika isika tontolo andro.
Tsy mamela antsika koa hanisa ny asantsika izany rehefa milomano.
Tsy mamela antsika hitahiry sy hitendry mozika izany.
Tsy mampiseho ny fampihetseham-batana amin'ny efijery.
Tsy mifanaraka amin'ny tady azo takalo ihany koa izy io.
Ny Fitfit Versa Lite dia sarany 159,95 euro, raha 199,95 euro kosa ny kinova mahazatra. Raha tadiavintsika ilay maodely misy tadiny azo ovaina, dia tsy maintsy misafidy ny Fitbit Versa Edition manokana isika, izay tafakatra 229,95 euro ny vidiny.
Raha tianao izany ampiasao ny teknolojia NFC handoavana ny fividiananao Isan'andro isan'andro, ny safidy tsara indrindra dia ny Versa sy Versa Special Edition, satria ny maodely Lite dia tsy mampiditra ny chip NFC.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Fitbit Versa Lite no fanombohana vaovao an'i Fitbit ho an'ny smartwatches
Pokémon GO dia mitentina 98% amin'ny vola miditra amin'ny lalao rehetra amin'ity saga ity